Dad ku geeriyooday dhisme caawa ku dumay Degmada Xamar Weyne (SAWIRRO) | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home Articles Dad ku geeriyooday dhisme caawa ku dumay Degmada Xamar Weyne (SAWIRRO)
Dad ku geeriyooday dhisme caawa ku dumay Degmada Xamar Weyne (SAWIRRO)
Inta laga warqabo saddex qof ayaa ku dhimatay, shan kalana nolosha ayaa lagu soo badbaadiyay, ka dib markii uu caawa soo dumay guri ku yaala Degmada Xamar Weyne ee Gobolka Banaadir.
Gurigan oo ku yaala xaafadda Raqayga oo dacalka ku haysa Saldhiga Booliska ee Afar Irdood ayaa ahaa dhisme hore, waxaana loo maleynaya in uu saamayn ku yeeshay roobabkii ugu dambeeyay ee maalmahaan ka da’aayay Magaalada Muqdisho.
Gurmad xoog leh oo loo sameynayo dadkii guriga ku sugnaa xilligii uu soo dumaayay ayaa xilligan ka soconaya halkaasi, waxaana lagu guuleystay in nolosha lagu soo badbaadiyo shan qof, halka burburka hoostiisana laga soo saaray meydadka saddex qof.
Wariye-yaasha oo gaaray goobtaasi ayaa soo sheegaya in weli uu socdo gurmad ballaaran, oo lagu baadi-goobayo in nolol iyo geeri mid uun lagu soo badbaadiyo dad kale, oo lagu la’yahay burburka dhismahaasi.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish), qaar ka mid ah Kuxigeenadiisa iyo Gudoomiyaha Degmada Xamar Weyne, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir (Carab) ayaa iminka ku sugan afaafka hore ee dhismahaasi.
Khamiistii ayay ahayd markii uu soo dumay dhisme ku yaala deegaanka Garisbaaley ee duleedka Magaalada Muqdisho, ayna ku dhinteen afar carruur oo hal qoys ka soo wada jeeday.